Wasiirka Cadaaladda XFS oo daaahfuray imtixaanka ruqsad bixinta Notaayada dalka – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By kullane / December 3, 2019 December 3, 2019
Muqdisho.(SONNA)...Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka XFS,Avv. Xasan Xuseen Xaaji ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku daah-furay kulan laxiriiray ka qeybgalka imtixaanka Ruqsad bixinta Notaayada dalka.
Kulaankaan oo ay soo diyaariyeen 3 hay-adood oo kala ah Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka, Maxkamada Racfaanka iyo Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.waxaa ka qeybgalay 40 qof oo doonaaya in ay helaan Ruqsada Nootaaya Dalka.
Wasiirka Wasaaradda ayaa bogaadiyay Guddiga soo diyaariyay imtixaankaasi,wuxuuna tilmaamay in muddo 30-sano ah la sameynaayo xubno loo soo xlay si daacad ah oo hufan.
Abuukaate Xassn Xuseen Xaaji, ayaa kula dar-daarmay, sharciyaqaanada ku guleysta imtixaanka in ay si daacad ah ugu adeegaan madda madaama ay dukumiintiyo muhiim ah ay u kala wareejinayan muwaadiniinta Soomaaliyeed .